izay fara heriko lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
izay fara heriko lalao
Rehefa Bruce Banner niasa tao amin'ny laboratoara ny famoronana manaraka, fa nanao fahadisoana ny kajikajy izay nahatonga ny loza – dia tonga ny dragona, ny biby, maitso sy masiaka izay fara heriko. Ny tantarany dia fantatra avy Marvel Sariitatra, fa ankehitriny ianao dia afaka hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto izay fara heriko sy niaraka ny mahery fo ao amin'ny ady, na mety ny tezitra. Amin'ny fotoana toy ireny, dia masiaka, tia ady sy kijanona. Izy mora ny hiatrika miaramila handrava ny totohondry trano avo-Mitsangàna, rip toy ny hareza ny ahitra, taonjato maro-antitra hazo oaka, navadibadiko fiara toy izao kilalao modely.
Lalao Izay fara heriko tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra izay fara heriko lalao
Hamaliana faty ny fara heriko
Avengers 2: Zavatra tsy Taratasy
Ao amin'ny Bad izay fara heriko Altitude
Mahery fo Evolisiona
Izay fara heriko Bike
Izay fara heriko 2: Mpandringana
Izay fara heriko Titan
Izay fara heriko: Cartoon fandokoana
Phineas sy Ferb Ry olo-maherin'ny Danville Mission Marville
Puzzles Superheroes Puzzle
The mampino izay fara heriko
Misintona manosika izay fara heriko
Red VS Green izay fara heriko. Tsary
Izay fara heriko - manimba ny tanàna
Photos ny zava-miafina. Wolverine vs. izay fara heriko
Izay fara heriko Vs Thor: fandokoana
Izay fara heriko Punch Thor
Dress izay fara heriko
Izay fara heriko: Puzzles
Ady totohondry teo izay fara heriko
Izay fara heriko - Bad Altitude
Tadiavo isa ao amin'ny sary
Mitady izay fara heriko efitra iray
Hametraka taila: Fianakaviana izay fara heriko
Izay fara heriko amin'ny namana hanangonako ny tafo tanimanga
Izay fara heriko Super Bike Driver
Izay fara heriko racer
Izay fara heriko hanorotoro City Center
Izay fara heriko SAINA FANETRI-BEN'NY
Ny Hazakazaky ny mahery fo
Afa-mandositra izay fara heriko
Ny mahery fo ny miaro ny fara heriko
Izay fara heriko ATV 2
Izay fara heriko eo amin'ny ATV 4
Super izay fara heriko Biker
Izay fara heriko hanipy fiara
Ride izay fara heriko
Snow izay fara heriko Trip
Hamaliana faty ny maitso goavana
Green izay fara heriko Jigsaw
Izay fara heriko Dress Up
Izay fara heriko ATV 3
Ny herin'ny ny fara heriko
Akanjo ho an'ny fara heriko
izay fara heriko aTV
Kiss izay fara heriko
Fahagagana an-tanàn-dehibe monster Hunk Hero Survival
Fanoloran-tena mahery fo
Miady ny biby
Ilay lehilahy maintso matanjaka indrindra
Ny sangan'asa lehibe Hulk Chitauri Takedown
Green Man Mamontsina
Monster tsy mampino
Izay fara heriko mierona ny Fiarovana
Izay fara heriko fomba 2
Mino ny Pixel Comics
Zavatra miafina izay fara heriko
Farany izay fara heriko lalao
Big sy ny biby goavam-be maitso Sariitatra Marvel Comics Manasa anao hilalao ny lalao izay fara heriko
Lalao Online Rehetra izay fara heriko lalao
ny tantaran 'ny mampino izay fara heriko
Ny izao tontolo izao dia manan-karena amin'ny Fantasy mampino sy ny manan-karena amin'ny eritreritra. Ny mpanoratra nameno azy tamin'ny zavaboary mahagaga, taitra hazo, miray mutants. Fa inona no tena miavaka ao amin'ny tontolo tsy misy fetra ary afaka hiaina mandrakizay isika inflate ny mponina namorona litera vaovao. Ny sasany dia anisan'ny zavaboary, ary vao teraka dia azy, fa ny hafa kosa no niseho noho ny ezaka ataon'ny olona. Frankenstein biby goavam-be, ary namorona ny namoha azy ho amin'ny fiainana, mamorona avy amin'ny momba ny tena. Ary izay fara heriko lasa ny vatana ny ratsy noho ny mikaviavia fitondran-tena ny Dr. Bruce Banner, rehefa nitarika fikarohana momba Gamma-baomba tao amin'ny laboratoara. Rehefa fipoahana mahery vaika nitranga, ny dokotera efa nandalo ny fitarihana, ary fahagagana Tafavoaka velona, ​​fa ny fototarazo no nandalo fiovana lehibe. Ankehitriny, dia tezitra toy ny fohaziny izay fara heriko – Lehibe maitso sy voafehy biby goavam-be.
dia namorona tantara ity Lee Stan sy Jack Kirby, ary ny bitany ny tantara an-tsary boky « ny mampino izay fara heriko » Dia natao ny voalohany ny May 1962, ny fanaovana ny fara heriko ao amin'ny faritry ny mahery fo ny gazety Comics Marvel. Tsara homarihina fa ny voalohany dia tsy mutant maitso, sy fotsy volo, toy ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny tsy nifidy mba hilazana ny fara heriko mba misy foko. Fa satria ny orinasa simika ny fe-potoana, izay mahatonga loko, dia tsy afaka miala amin'ny marina amin'ny lafiny teknolojia, biby goavam-be avy amin'ny fifaliana ho famotsorana nahazo ny maitso, dia pahafotsy indray. Mba hisorohana ny fikorontanana bebe kokoa, dia nanapa-kevitra ny hijanona eo amin'ny maitso, ary na dia Avereno soratana ilay olana voalohany ao amin'ny boky tantara an-tsary, izay voalaza momba ny hoso-doko.
Apetraho ny herisetra, milalao lalao izay fara heriko
Ary ny amin'ny toetry ny amin'ny izay fara heriko, dia mora ny maminavina fa izy tia ady, mampidi-doza ny olon-kafa sy ny mifandanja. Nisy jerena dia lasa mazava fa tsy misy fifanarahana dia tsara kokoa Fitom. Izay fara heriko smashes manodidina, ary niverina ho any olombelona ihany no endrika, dia mifoha ao amin'ny horohoro ny fandikan-dalàna.
Ny fahombiazana Sariitatra dia matetika ny loharanom-by-vokatra
Games izay fara heriko, efa voavoatra ho anareo, maneho ny hatezerana rehetra biby goavam-be tao anatiny, vonona ho misy hetsika miaramila, ihany no nandroaka ny fahatezerana, splashing ny lelan-maitso ny ainy. Manokana namerina ny tantara tany am-boalohany dia tsy miandry, fa ny fampiasan-kery dia hanana hatrany hatrany. Na dia izany dia fitadiavana na Walker, ny fara heriko mbola tsy afaka ny tsy hiverina ny rafitra manodidina azy rava, ary tsy mba paingory teo ny roa am-polony mpitazana. Izany no ilay maherifo fotsiny, izay tsy mba milaza fa miady manohitra ny ratsy, araka izay atao hoe. Fa mba refesina tena amin'ny biby hafa, dia sambatra foana, ary raha toa ka mandefa niaraka taminy ho any amin'ny Lalao Olympika, dia ho afaka hanao mba handray anjara amin'ny sorevnovaniyax. Na dia eo aza ny hoe ny fara heriko saika tsy mety resy, ny mpanohitra dia tsy manana hery sy tsy vonona ny hiady ho hoatra ny olona adala ny ainy. Izay fara heriko lalao – dia foana ny ady tsy misy fitsipika. A izay mety ho fepetra, raha Nisamboaravoara fankahalana? Rehefa mifehy ny mahery fo, ianao hampihorohoro ny mponina tao an-tanàna, mandeha ny feno fitomboana goavana sy mandrava trano nanodidina azy, hazo nandrovitra avy amin'ny tany toy ny ahitra kely, nandrava fiara faladian'ny niteraka tongotra sy ny korontam tara toy ny fitaratra.
rehefa mankafy be ny fandringanana, ady sy ny fipoahana, dia afaka milalao ny fara heriko, nahita
eo andamosiny ny sary fanampiny zavatra
efa ho mitovy razbezhnosti amin'ny sary
Toy izany koa singa
Play & laquo, telo misesy »
mba hanangona piozila
colorize mainty sy fotsy fanoharana